चिसिनौ, मोल्दोभाको राजधानीमा पर्यटन | यात्रा समाचार
Getaways यूरोप | | Getaways यूरोप, मोल्डाविया
मोल्डोभा, हो, मोल्डोभा। तपाईं मलाई यो जस्तो देशको बारेमा के भन्न सक्नुहुन्छ? सायद यो पनि होइन कि तपाईंको राजधानी छ चिसिनाu, वा त्यो लामो समयदेखि यो विलुप्त भएको सोभियत संघको हिस्सा थियो, वा त्यो आज हो युरोपको सबैभन्दा गरीब देश मध्ये एक। र यसको पर्यटन? ठीक छ, सत्य यो हो कि तपाईं धेरै भन्न सक्नुहुन्न भन्न ...
किनभने चिसिनौको माध्यमबाट यात्रा गर्नु कुनै सपनाको यात्रा होईन, यो टाढाबाट। मोल्डोभनको राजधानी अझै पनि पुरानो कम्युनिज्मको केही प्रभावमा परेको छ। यसका धेरै जसो छिमेकहरू अझै पनि ती कुरूप खैरो कंक्रीट भवनहरू छन्, यस्तै कम्युनिष्ट मजदुर समुदायको।
त्यहाँ धेरै स्थानहरू छैनन् जुन उद्धृत गर्न सकिन्छ चिसिनौमा भ्रमण गर्नुहोस्। सोभियत वास्तुकला, सबैका बाबजुद पनि, अत्यधिक चम्किदैन। स्टेफन सेल मारे स्मारक, बोटानिकल पार्क, महानगर क्याथेड्रल र रिस्कनी पार्क यसको मुख्य आकर्षण हुन सक्छ।
किनभने चिसिनौले घमण्ड गर्न सक्ने धेरै पार्कहरू छन्। हुनसक्छ उत्तम हो Valea Morilor पार्कशहरको बिचमा एकदम शान्त ठाउँ जहाँ स्थानीयहरू हिंड्छन्। अर्को पार्क Drendariu पार्क, वा Aluneiul पार्क हो, यसको प्रगतिहरूको स्मारकहरूको साथ।
एक चिसिनौमा गर्न आवश्यक भ्रमणहरू यो उसको हो यहूदी सिमेन्टरी। यसमा ठूलो संख्यामा मकबराहरू छन्, ती मध्ये केहि पुरानो। यद्यपि यो सम्मानका साथ भ्रमण गर्नुपर्दछ, किनकि यो अझै पनि स्थानीय समुदायले प्रयोग गरिरहेको छ। त्यो हो युरोप मा सबैभन्दा ठूलो यहूदी कब्रिस्तान। यसको सभाघरको नजिक जानुहोस्, जसले पुरानो तोरह पाण्डुलिपिहरू राख्छ।
बार वा रेस्टुरेन्टमा बस्दा चिन्ता नलिनुहोस्, किनकि धेरै मोल्दोभन्स अंग्रेजी बोल्छन्, विशेष गरी युवाहरू। रूसी प्रायः बोल्दछ, र रोमानियाली पनि। जे होस् कुनै पनि होटेलमा उनीहरू तपाइँलाई अ in्ग्रेजीमा पूर्ण रूपमा बुझ्नेछन्।
र तपाइँलाई चिसिनौको स्मारिका ल्याउन, तपाइँ के खरीद गर्न सक्नुहुन्छ? ठिकै छ, मोल्डोभामा उनीहरूसँग धेरै राम्रो कोग्नाक छ। तिनीहरू यसलाई सानो जारमा बेच्छन्, धेरै राम्रो मूल्यमा। मदिरा पनि अत्यधिक सराहना, र केहि स्थानीय शिल्पहरु, विशेष गरी ऐतिहासिक केन्द्र मा।
मलाई लाग्दैन कि तपाईं केहि गर्न जाँदै हुनुहुन्छ चिसिनौ यात्रा, तर, यदि तपाइँसँग कहिल्यै छ भने मोल्डोभा जानुहोस्कम से कम तपाईंसँग पहिले नै आफ्नो राजधानीमा केही डाटा छ, हैन?
फोटो मार्फत पर्यटक स्थल
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » मोल्डाविया » चिसिनौ, मोल्दोभाको राजधानीमा पर्यटन